जुत्ता चप्पल व्यापार मेला हुँदै
काठमाडाौं : फुटवेर मेनुफयाक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपालले कात्तिक २६ देखि मंसिर १३ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जुत्ता चप्पल व्यापार मेला आयोजना गर्ने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मेला आयोजना गर्न लागिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
वर्षमा २ पटक काठमाडौंमा र हरेक प्रदेशमा एक पटक व्यापारीक मेला आयोजना गर्ने नीतिअनुसार यो वर्षको पहिलो मेला भृकुटीमण्डपमा गर्न लागिएको एसोसिएसनले जनाएको छ ।
मेलामा नेपालका ३० कम्पनीका ६० भन्दाबढी स्टलहरु रहने छन् । मेलामा उपभोक्ताले भारी छुटका साथै गुणस्तरीय उत्पपादनहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं–लोमान्थाङ हिरो एक्सप्लस मोटरसाइकल यात्रा आयोजना
काठमाडौं : आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनको उद्देश्यसहित नेपालमा हिरो मोटरसाइकलको आधिकारिक बिक्रेता नेपाल जनरल मार्केटिङले काठमाडौं– लोमान्थाङ मोटरसाइकल यात्रा आयोजना गरेको छ । हिरो एक्सप्लस २०० मोटरसाइकल खरिद गरेका ग्राहकलाई लोमान्थाङ भ्रमण गराउनका लागि यात्रा थालिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सोमबार बिहान प्रदर्शनी मार्ग स्थित नेपाल पर्यटन बोर्टबाट यात्रा सुरु भएको हो । यात्रामा सहभागी ३० जनाभन्दा बढीले काठमाडौं–पोखरा–लेते–जोमसोम–मुक्तिनाथ हुँदै लोमान्थाङसम्मको करिब नौ सय किलोमिटर यात्रा गर्नेछन् ।
नेपाली फुटबल टीमका कप्तान किरण चेम्जोङले सोमबार बिहान भृकुटीमण्डपमा फ्ल्याग अफ गरेर यात्राको औपचारिक सुरुवात गरेका हुन् । उनले यात्रामा सहभागी सबै मोटरसाइकल चालकहरुलाई अनुशासित भएर सतकर्ता अपनाउँदै भ्रमण पुरा गर्न आग्रह गरे ।
आइएमईको वर्ल्ड भ्रमण विथ साइग्रेस शुरू
काठमाडौं : आइएमईले वर्ल्ड भ्रमण विथ साइग्रेसको आयोजना गरेको छ । नेपालका सातवटै प्रदेशका मुख्यमुख्य शहरहरूमा कार्तिक २३ देखि मङ्सिर १७ सम्म कार्यक्रम आयोजना गरिएको आइएमईले जनाएको छ ।
वर्ल्ड भ्रमणमा नेपालको लोकप्रिय स्टोरी टेलर साईग्रेसद्वारा श्रमका लागि विदेशमा गएका नेपाली कामदारहरुको संघर्षको कथा सँगसँगै रेमिटेन्स रकमको सहि सदुपयोग र यसबाट प्राप्त हुने लाभका विषयलाई कथा मार्फत प्रस्तुती गर्नेछन् ।
कार्यक्रमको टिकेटिङ पार्टनर ‘आइएमई पे’ रहेको छ भने आतिथ्य पार्टनर रोडहाउस क्याफे रहेको छ । साथै एडुकेसन पार्टनर टेक्सस् कलेज अफ म्यानेज्मेन्ट र आइटी रहेको छ भने मिडिया पार्टनर रुटिन अफ नेपाल रहेको छ ।
गुराँस लघुवित्तको लाभांश स्वीकृत
काठमाडौं : गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नाफाबाट १६.९० प्रतिशत बोनस शेयर दिने सञ्चालक समितिको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । साधारणसभाले ०.८८ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ ।
साधारणसभाले संस्थापक समूहअन्तर्गत रिक्त रहेका ४ जना सञ्चालकहरुमा उदयनारायण बराल, अशोक गौतम, राजुप्रसाद अधिकारी र विजयकुमार दाहाललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ ।
सिलिङ्कसको नयाँ लोगो सार्वजनिक
काठमाडौं: सिलिङ्कस ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रा.लि. नयाँ कर्पोरेट लोगो सार्वजनिक गरेको छ । सिलिङ्कसले आफ्नो कर्पोरेट लोगो परिवर्तन गरेर रुपान्तरणको शुरुवात गरेको जनाएको छ ।
सिलिङ्कसले नीलो र सुन्तला रङमा संयोजन गरी नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको हो । सो लोगोले संस्थाको नामभित्रको मर्म र आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टि र खुशी समेत प्रतिनिधित्व गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विभिन्न ठाउँका यात्राका लागि टिकटिङ गर्ने सिलिङ्कसले प्रतिस्पर्धी मूल्य र ग्राहक सन्तुष्टिलाई आफ्नो प्राथमिक लक्ष्य बनाएको छ ।
नयाँ लोगोले ट्राभल ट्रेडमा विकास भएको आधुनिकता र बहुआयामिकता प्रष्ट्याउने पनि कम्पनीले जनाएको छ । सिलिङ्कसकी कार्यकारी निर्देशक पावना श्रेष्ठले लोगोमा गरिएको परिवर्तन कोभिड–१९ पछिको पुनर्जागरण भएको बताइन् ।
काठमाडौं : सनराइज बैंकले बैंकका शेयरधनीलाई सात प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट ६.६५ प्रतिशत शेयर लाभांश र कर प्रयोजनका लागि ०.३५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो।
बैंकको हाल कायम चुक्ता पूँजी नौ अर्ब ४८ करोड ७९ लाख ४४ हजार ४९९ रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको सोमबारको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृत र बैंकको साधारणसभाले पारित गरेपछि वितरण हुनेछ।
भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रजत जयन्ती मनाउँदै
भक्तपुर : भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड च्याम्हासिंह भक्तपुरले स्थापनाको २४ वर्ष पूरा गरेर २५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा रजत जयन्ती मनाउने भएको छ । सो अवसरमा संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि गर्ने भएको छ ।
आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका अध्यक्ष बलराम प्रजापतिले संस्थाको रजत जयन्ती पारेर कात्तिक २२ गतेदेखि २७ गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम राखिएको बताए । संस्थाले ७० वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई पौष्टिक आहार वितरण गर्ने, महिलाहरुको विशेष भेला आयोजना गर्ने, कसिमला पाय (नेवारी खेल) प्रतियोगिता गर्ने, रक्तदान कार्यक्रम गर्ने, नगर सरसफाई गर्ने, सुकुन्डा र्‍याली लगायतका कार्यक्रम गर्ने उनले बताए ।
रजत जयन्तीको मुख्य कार्यक्रम कात्तिक २७ गते गरिने र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले उद्घाटन गर्ने प्रजापतिले बताए ।
तराईका विभिन्न जिल्लामा नक्कली चुरोटको बिगबिगी
महोत्तरी : महोत्तरी, धनुषा र सिरहा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा नेपाली ब्राण्डकै नाममा भारतीय नक्कली चुरोटको बिगबिगी बढिरहेको पाईएको छ ।
नेपाल र भारतसँग सीमा जोडीएको अधिकांश बजारमा नक्कली चुरोट खुलेआम बिक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ । आन्तरीक राजस्व कार्यालय धनुषाको रोहवरमा महेन्द्रनगर ईलाका प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले क्षिरेश्वर नगरपालिका ५ स्थित शंकर जनरल स्टोर्स र चन्दन किराना स्टोर्समा नक्कली चुुरोटको खरिद विक्री भईरहेको गोप्य सुचनाका आधारमा छापा मारेर मंगलवार सूर्य नेपाल प्रालीको सक्कलीमा गाढा रातो रंगको बट्टा जस्तै देखिने ४९९ थान खुकुरी ब्राण्डको नक्कली चुरोटको बट्टा फेला पारेका छन ।
सूर्य नेपाल प्रा.लि.को सक्कलीमा गाढा रातो रंगको बट्टा रहेको छ भने नक्कली चुरोटमा आन्तरिकराजस्व विभाग लेखिएको नक्कली स्टिकर, फिक्का रातो रंगको, बट्टाभित्र चुुरोटको आकारमा समेत परिवर्तन रहेको देखिएको छ ।
नक्कली चुरोट सहित पसलका सञ्चालक शंकर साहलाई महेन्द्रनगर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि आन्तरीक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम पठाईएको छ ।
कोरोनाले प्रभावित व्यवसायीले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउने
काठमाडौं : कोरोनाका कारणले समस्यामा पारेका उद्योगी र व्यवसायीले ५ करोडसम्म पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना निकालेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनर्कर्जाका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले राहत नपाए धेरै उद्योग–व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट अति प्रभावित र मध्ये प्रभावित व्यवसायीहरूलाई पुनर्कर्जाको नीति लिएको हो ।
कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी र व्यवसायीले आफूले कारोबार गरेको बैंकमा पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्ने छन् ।
सरकारले यातायात, पर्यटन, चलचित्र उत्पादन, सिनेमा हल, रोजगारी गुमेका, कुखुरापालन व्यवसाय, पशुपन्क्षी, हवाई तथा पर्यटकीय मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, पार्टी प्यालेस, मत्स्यपालन लगायतका व्यवसायलाई कोरोना प्रभावितको सूचीमा राखेको छ ।
सीपमुलक व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, विद्यालय, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादक, छपाइ प्रकाशन तथा सञ्चार गृह, फलामजन्य व्यवसाय र अस्पताल पनि प्रभावित सूचीमा छन् ।
'पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले बेवास्ता गर्‍यो'
पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन व्यवसाय आवश्यक छ । सन २०२० लाई पर्यटन वर्षको रुपमा घोषणा गरिएपछि नेपालका धेरै व्यवसायीले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरे । तर कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भयो र ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो । यस्तो अवस्थामा पर्यटन व्यवसायीले कसरी आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका छन ? व्यवसाय निरन्तरताका लागि राज्यबाट कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर मध्यान्ह दैनिकका लागि सिबी भट्टराईले होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवं नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सन्तोष उप्रेतीसँग गरेको कुराकानीको सार ।
लामो समय पर्यटन क्षेत्र ठप्प भयो । चाडपर्वले केही प्रभाव पारेको छ ?
नेपाल सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरेर पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने अभिप्रायले कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबेला हामी पनि उत्साहित भएका थियौं । त्यही बेला कोरोना महामारीको शुरुवात भयो र पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा प्रभावित भयो । त्यसले गर्दा हामीलाई ठूलो नोक्सानी भएको छ । अहिलेपनि राज्यले नीतिगत रुपमा जसरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन् ।
लकडाउन र निषेधाज्ञाले गर्दा भएको क्षतिका लागि राहत दिदन सहुलियत दरमा चालु पूँजीको व्यवस्था, ब्याजदरमा छुट, ऋण अनुदान लगायतका प्याकेज पर्यटन क्षेत्रमा पनि उपलब्ध गराइने हाम्रो अपेक्षा थियो तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनैपनि सुविधा पाइएको छैन् । मौद्रिक नीतिमार्फत केही राहतका कार्यक्रम आएपनि सबै पर्यटन व्यवसायीको पहुँचमा पुग्न सकेन त्यसले गर्दा पनि हामी समस्यामा छौं ।
कोरोनाका कारण कति व्यवसायीहरु विस्थापित भएका छन् ?
कोभिडले गर्दा बागमती प्रदेशमा करिब १५ प्रतिशत व्यवसायीहरु विस्तापित भइसकेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ । शहरी क्षेत्र र राजधानी समेत रहेका क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायमा केही चहलपहल देखिएपनि पहाडी जिल्लाका व्यवसायीहरु विस्तापित हुनुपरेको छ ।
सरकारले बाह्य पर्यटक भित्र्याउन मापदण्ड खुकुलो बनाएको छ । त्यसको असर पर्यटन क्षेत्रमा कत्तिको परेको छ ?
सरकारले बजेटमार्फत पर्यटन क्षेत्रको सहयोगको लागि भिसा शुल्कमा छुट दिने, नेपाल आउँदा सहजिकरण गर्ने गरी केही नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । त्यस्तै नेपाल घुम्न आउनेलाई लगाइएका कडा मापदण्ड हटाई केही खुकुलो गरिएको छ त्यो स्वागतयोग्य पनि छ । तर नेपाल घुम्न आउने पर्यटक छिमेकी मुलुक भारत र चीनका रहेका छन् । विशेषगरी भारतीय पर्यटकहरु नेपाल आउन भिसा पनि नचाहिने र धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नेपाल घुम्न आउने गर्दछन् । सीमा नाकाहरु बन्द हुँदा उनीहरु आउन सकेका थिएनन् । अहिले विस्तारै नाकाहरु खुल्दै गएका छन् । राज्यले केही नीतिगत निर्णयहरु गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । राज्यले निर्णय गरिसकेपछि पनि दुई नम्बर प्रदेशमा सीमा नाका खोल्नका लागि व्यवसायीहरुले निकै प्रयास गर्नुपर्‍यो । १०/१५ दिन अगाडि मात्रै नाका खोलिएको छ । बाह्य पर्यटक भित्र्याउन मुख्य नाकाहरु पूर्ण रुपमा नखुल्दासम्म गाह्रै हुन्छ ।
दशैँ र तिहारको बेलामा आन्तरिक पर्यटक बढेको देखिएको छ । यसले त पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रै भएको होला ?
हो, अहिले आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल केही बढेको छ । चाडपर्वमा बिदा समेत हुने भएकाले पोखरा, रारा, चितवनलगायतका ठूला पर्यटकीय क्षेत्रहरु र सबै धार्मिक क्षेत्रहरुमा राम्रै चहलपहल छ । बागमती प्रदेशका सिन्धुली, नुवाकोट, रसुवा लगायतका पहाडी जिल्लाका सदरमुकामदेखि अन्य क्षेत्रमा अहिले पनि पर्यटकको चहलपहल त्यति देखिदैन । सबैभन्दा बढी धार्मिक रुपमा प्रख्यात ठूला पर्यटकीय क्षेत्रहरुमा नै चहलपहल देखिएको छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रमा पनि पर्यटकको चहलपहल केही बढेको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको पुनरकर्जा सुविधा साना व्यवसायीले पाएनन भन्ने छ । त्यसका लागि केही पहल गर्नुभएको छ ?
राज्यले होटल क्षेत्रलाई सूचारु गर्न नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरिएको कुरा गर्छ । अधिकांश व्यवसायीहरु घर भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गर्दै आएका छन् । लगानी गरेका छन् । तर उनीहरुले सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा लिन सक्ने स्थिति रहदैन् । व्यवसाय धितो राखेर कर्जा पाउने स्थिति अहिले पनि छैन् । हामीले महासंघ मार्फत राष्ट्र बैंकसँग छलफल पनि गर्‍यौं । केन्द्रीय बैंकले आश्वासन त दिएको छ तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनको पक्षमा कुनै काम भएको दखिदैन ।
पर्यटन व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउन राज्यले के गर्नुपर्छ ?
हामीले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलाकै स्थितिमा ल्याउनका लागि राज्यले कम्तिमा पनि पलायन हुन लागेको अवस्थामा रहेका व्यवसायीहरुलाई थप पुनरकर्जा मार्फत सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंक र व्यवसायीबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिओस भन्ने हामी चाहन्छौं । नीतिगत रुपमा पनि राजस्व र व्यवसाय नविकरणमा सुविधा दिनुपर्छ ।
नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ उद्यमी व्यवसायीको हितका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?
नुवाकोट केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंसँग जोडिएको जिल्ला हो । काठमाडौंबाट तीनवटा नाकामार्फत नुवाकोट प्रवेश गर्न पनि सकिन्छ । त्यसैले त्रिदेशीय मार्गको रुपमा ट्रान्जिट पोइन्टको रुपमा विकास हुन सक्ने सम्भावना भएको जिल्ला पनि हो नुवाकोट । भारतको ठोरी नाका र चीनको केरुङ नाकाबाट नजिकै पर्ने भएकाले पनि व्यवसायीक सम्भावनाहरु धेरै छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लामा उद्योग, कलकारखाना भित्र्याउन पहल गरिरहेको छ ।
त्यस्तै नुवाकोट ऐतिहासिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण भएकाले पर्यटकीय गन्तव्यका लागि निकै ठूलो सम्भावना छ । राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमा आक्रमण गर्न नुवाकोटलाई आधार बनाएको नेपालको पहिलो राजधानी पनि नुवाकोट हो । सात तले दरबार लगायतका एतिहासिक सम्पदाहरु यहाँ रहेका छन् । जसले गर्दा यहाँ निकै धेरै पर्यटकीय सम्भावना रहेका छन् । नुवाकोटलाई व्यवसायीक हब बनाउने तयारी संघले गरिरहेको छ ।